Maxaan ka ogaanayaa naqshadeynta bogga internetka?
Guud ahaan raadinta mashiinka raadinta waa isku dheelitir qiyaaso aqoon leh iyo go'aammo xogta la go'aaminayo. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo ay jiraan caqiidooyinkan, waxaa jira mabaadi'da aasaasiga ah iyo dhaqamada aasaasiga ah. Mid ka mid ah qayb muhiim ah oo ka mid ah shabakadda e-commerce waa qaabka gudaha ee websaydhka ama, sida ay sidoo kale loo isticmaalo, dhismaha. Nashqada dhismaha ee E-commerce ayaa laga yaabaa inay sameyso ama jabiso gaadiidkaaga - playground usato prezzi.
Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad hirgaliso aasaaska website-yada e-ganacsiga oo aad ku dhejinayso heerarka gawaarida raadinta. Maqaalkani, waxaan ka wada hadli doonaa waxyaabaha aasaasiga ah ee mareegta e-commerce ee kaa caawin doona inaad abuurto gaadiid tayo leh oo la beegsan karo goobtaada iyo sidoo kale hagaajinta khibrada user. Naqshadeynta mareegta website-ka e-commerce
Ku xir bogaaga bogga
Mashruuc waa qayb muhiim ah oo ka mid ah bogag kasta oo kasta ha ahaado blog ama e-ganacsi. Boggan wuxuu helayaa qadarka ugu badan ee taraafikada la bartilmaameedsanayo makiinadaha raadinta. Taasi waa sababta ay ugu jiraan macluumaadka ugu qiimaha badan ee ku saabsan alaabtaada ama adeegyadeeda, waxaadna siisaa dadka isticmaala faham cad oo ah qaybaha boggaga kale ee ku saabsan. Waxaad u baahan tahay inaad boggaaga badeecada u dhigto sida ugu dhow ee ugu macquulsan ee boggaaga si aad u keento taraafikada iyo maamulka. Waa fursad fiican oo lagu hagaajin karo boggaaga navigation sida dadka isticmaala u baahan yihiin inay u yimaadaan macluumaadka loo baahan yahay labo fure. Intaa waxaa dheer, adoo samaynaya, waxaad muujineysaa Google iyo makiinadaha kale ee raadinta ah in boggaga qaar ee goobtaada ganacsiga eek u muhimsan aadna tahay sababtuna ay tahay xaqiiqda ah inay si sahlan u heli karaan isticmaalayaasha.
Bogagga ugu muhiimsan ee bogagga
. Waxay ka kooban yihiin aqlabiyad badan oo ka mid ah maamulka goobtaada. Dukaamada ugu muhiimsan ee dukaamada ganacsiga e-commerce waxay u badan tahay bogagga qaybtaada. Iyadoo si sax ah loo qaabeynayo boggaan, heerka maamulka ayaa ka gudbay bogga boggaga category si qiimo sarre leh sababtoo ah waxay udhigaan agagaarkaaga boggaaga oo keena awoodda sare. Noocyada noocan ah waxay ku siinaysaa fursad aad ku dhaafi karto gaadiidka iyadoo loo marayo dhammaan qaybaha shabakada si haboon.
Qaybta bogagga bogagga
Dhismaha website-ka e-commerce,. Si loo hagaajiyo maamulka goobta iyo kor u qaadista diinta, waxaad u baahan tahay inaad ku darto boggagaan si aad uhogal ah oo tayo sare leh, mid gaar ah leh. Markaad sidaa sameysid, waxaad awoodi doontaa inaad soo saarto awoodda bogga qaybta hoose.
Bogagga bogagga hoose ee hagaajinta maamulka
Isla markaad sare u qaaddo awooddaada heerka navigation, waxaad hagaajin kartaa awooda boggaga qaybaha hoose. Si kor loogu qaado awooda qaybaha hoose, waxaad u baahan tahay inaad hirgeliso habka dhismaha ee isku midka ah boggaga bogga. Waa inaad ku dhajisaa mawduucooda ku dhow bogga intarneedka e-ganacsiga, taas oo muujinaysa in boggani yahay mid qiimo leh dadka isticmaala. Waxaa intaa dheer, isku xirka ku jira qaybaha bogagga qaybta hoose waxay abuureysaa siyaabo badan oo loogu talagalay dadka isticmaala sidoo kale sidoo kale calaamadaha Google si ay u fahmaan isku xirnaanta iyo kudhexgalka midba midka kale.